EYONA MIBONISO IBALASELEYO YEDISNEY PLUS UKUBUKELA NGOKU (NGE-MATSHI 2021) -IRADIO TIMES - YINTONI OMELE UYIBUKELE
Eyona miboniso ilungileyo yeDisney Plus-eyokuqala kunye nokubuyisa iintandokazi
Inkonzo yokusasaza yeDisney inamawaka eziqendu zeTV ukuba zibukele- kwaye kukho ezingakumbi ngoku, enkosi ngokongezwa kweNkanyezi.
Sele ingunyaka okoko iDisney Plus yasungulwa e-UK kodwa kubonakala ngathi inkonzo entsha yokusasaza kwibhloko isanda kuqala.
Ukongezwa kwangoko kwiqoqo layo esele linomdla lwezihloko zibandakanya iqonga lesibini leqonga lokuqala le-Marvel, imincili I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika , kunye nostalgia nostalgia fest oko kukuthi Amadada anamandla: abaguquli bemidlalo .
Ezi zongezo zintsha zidibanisa imvelaphi esisiseko enje ngothotho lweeMfazwe Star UMandalorian - kungekudala ukufumana i-spin-off ngohlobo lweNcwadi kaBoba Fett -kwaye kuxoxwa kakhulu ngeMarvel Umbono weWandaVision .
Inkwenkwezi kwiDisney Plus ngoku ifike eqongeni - itayile entsha kraca eyongeza imiboniso evela kwiipropathi ezingabanini beDisney ezinje ngeFX, inkulungwane ye-20 Studios kunye neABC, okuthetha ukuba ngoku kukho umxholo ongaphezulu.
Iiconic series ezinje ngeDesperate Housewife kunye neGrey's Anatomy ziza nokongezwa kwiNkanyezi, njengoko kunjalo nemidlalo emitsha yentsusa efana Isibhakabhaka Esikhulu . Siyakucaphukela ukusebenzisa i-cliche-yento-yomntu wonke, kodwa iDisney ngokuqinisekileyo iphosa inani elibanzi labantu kule mihla.
Nazi ezinye zezihloko ezilungileyo kwiDisney Plus ukuba umbe ngokukhawuleza, kubandakanya ukukhutshwa kwiNkanyezi.
Eyona miboniso ilungileyo yeDisney Plus
Kulungile, ngoku ukwiDisney Plus, lixesha lokuba uqalise ukujonga iinkqubo ezinkulu zeTV ezandleni zakho. Ukuba ujonga ukhetho lwefilimu, jonga konke okusemandleni ethu Iifilimu zeDisney Plus kuba sigxile kwimiboniso yeTV ukusukela apha.
I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika
I-poster yobugcisa ye-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika
Olu luhlu lwamanyathelo aphilayo avela kwiMarvel Studios ibona uAnthony Mackie ebuya njengoSam Wilson, AKA Falcon, ngelixa uSebastian Stan esenza indima yakhe njengoSoldier Wasebusika. Bajoyine iqela elixhasayo likaDaniel Brühl, uEmily VanCamp kunye noWyatt Russell ukubala nje abambalwa. Cwangcisa kwi-MCU, I-Falcon kunye ne-Soldier yasebusika uthatha emva kweziganeko zeAvengers: Endgame xa uSam enikwa uxanduva lokuthatha ilifa likaCaptain America.
Amadada anamandla: abaguquli bemidlalo
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 emva kokuphela kweeklasikhi ezingama-90 zakudala, Amadada anamandla luthotho lwefilimu ye-retro yamva nje yokufumana ukulandelelwa kweTV okumiselweyo. Ewe, kunjalo, ngekhe ibenguMandla amaDada ngaphandle komqeqeshi othandekayo uGordon Bombay, noEmilio Estevez ebuya njengenguqu ediniweyo kwihlabathi jikelele yomlingisi oqeqesha iqela elitsha labangaphantsi kwezinja ngokuchasene neeDucks ezinokukhuphisana ngoku.
I-WandaVision yobugcisa bokwazisa (uElizabeth Olsen noPaul Bettany)
Olunye uthotho lwamanyathelo aphilayo avela kwiMarvel Studios, ekwayindlela eya kwiAvengers: Endgame. U-Elizabeth Olsen kunye noPaul Bettany baphinde badibana njengoWanda Maximoff (AKA Scarlet Witch) kunye noPaul Bettany Umbono ngokwahlukeneyo (ewe, ngaphandle kweziganeko kwi-Endgame). Esi sibini sikhangeleka ngathi siphila ubomi bokuphupha, obuzolileyo basezidolophini Umbono weWandaVision -Kodwa phantsi kwento ebonakalayo, konke kucacile ukuba akulunganga.
Idrama yolwaphulo-mthetho yase-US sesinye sezihloko ezibandakanyiweyo kwingqokelela ye-Star, kunye no-Kiefer Sutherland obalaseleyo njenge-arhente yobunqolobi uJack Bauer.
Uthotho lokuphumelela lwe-Emmy, olwaqala ukusasaza iFox ukusukela ngo-2001 ukuya ku-2010 (ngemvuselelo emfutshane ngo-2014), lulandela uBauer njengoko ezama ukumisa iziza zabanqolobi, kuthotho ngalunye olugubungela iiyure ezingama-24 kubomi bearhente karhulumente.
Disney Plus yoqobo
Ukuqhawulwa kwenkonzo entsha yase-Bhritane, UMandalorian luthotho lweemfazwe ze-Star Wars ezenzeka ngoku kwi-TV evela kuJon Favreau- kwaye ngaphezulu, kufanelekile ukuba uyiqwalasele.
Umdlalo obalaseleyo weZihlalo zobukhosi 'uPedro Pascal njengesihloko esithi Mandalorian, umboniso usetelwe kwindalo iphela ye-Star Wars phakathi kweziganeko zokuBuya kweJedi kunye noMkhosi wokuVusa. Inentabalala kubalandeli be-hardcore, kodwa isuswe ngokwaneleyo kwi-Skywalker Saga ukuba inokonwatyiswa ngabantu abatsha kwi-franchise. Kwaye ukuba awukamva, kukho umntwana uYoda, oye waba yenye yezona ndawo kuthethwe ngazo kwimiboniso ekhuthazayo kunye nengxoxo kwi-intanethi okoko wafika umntwana evela kumnyele, kude, kude, kude .
Ixesha lesibini liqale ngo-Okthobha 2020, ukubuyisa umlinganiswa othandwayo ngumlandeli ukusuka Star Wars lore.
Sayina ungene kwiDisney Plus ngoku nge- $ 79.90 yonyaka okanye i- £ 7.99 ngenyanga
Amaxesha onyaka amabini anesibini edrama yomdlalo weqonga kaDonald Glover eAtlanta ngoku ziyafumaneka kwiDisney Plus ngeNkanyezi, kunye nenkwenkwezi yoLuntu edlala ngokuyeka ikholeji ethatha uxanduva lomsebenzi womzala wakhe.
Ukudlala ngokuthandwa nguBrian Tyree Henry, uLakeith Stanfield, uZazie Beetz kunye noKath Williams, olu ngcelele lokuphumelela lwe-Emmy ngumdlalo wexesha elifanelekileyo, ogcwele ukubonwa okuhlaziyayo kunye nemigca ye-eccentric.
Idrama entsha-eyintsusa ebalaseleyo yeNkanyezi- ivela kuDavid E. Kelley, umyili weeNcoko eziKhulu eziKhulu kunye nokuLungisa. Ziinkwenkwezi uRyan Phillippe njengepolisa elalisakuba nengxaki elidibanisa umfazi wakhe (Katheryn Winnick) kunye nomnye umphenyi wabucala (uKylie Bunbury) ukufumana oodade ababini abathunjwe ngumqhubi weloli eMontana.
Igalari yeDisney: Ngaphakathi kweMandalorian
Kwaye ukuba ulambele iMando engaphezulu, iDisney ikhuphe olu luhlu lwamaqabane aluthathayo olukusa ngasemva kwe-blockbuster ye-sci-fi epic. Igalari yeDisney: Ngaphakathi kwiMandalorian iphonononga yonke imiba yemveliso, ukusuka kuluhlu lwe-A-uluhlu lokuyila ngasemva kwayo ukuya kwiziphumo ezibonakalayo, kunye nenkuthazo ethathwe kwizitolimende zangaphambili kwi-Star Wars franchise. Umbonisi uJon Favreau ukhokelela kwiingxoxo ezijikelezayo kunye namanye amagama aphezulu avela kumdlalo, ngelixa ividiyo evela kwiseti ityhila ngqo ukuba wenziwe njani umlingo.
Oomama abaphelelwe lithemba
Umdlalo weqonga odlala umdlalo weqonga, owawusasazwa okokuqala kwi-ABC ukusukela ngo-2004 ukuya ku-2012, iinkwenkwezi uTeri Hatcher, uFelicity Huffman, uMarcia Cross kunye no-Eva Longoria njengeqela labahlobo abahlala kwi-cul-de-sac ye-Wisteria Lane - kodwa ayizizo zonke njengoko kubonakala ngathi.
Xa ummelwane wabo uMary Alice Young ngequbuliso ethatha ubomi bakhe, iqela liqala ukuphanda ukuba kwenzeka ntoni kanye emfihlekweni ngelixa kufunyanwa iimfihlo ezimnyama kufutshane kakhulu nekhaya.
Olu luhlu luthandwa kakhulu luye lwaphela kunyaka ophelileyo emva kwamaxesha ali-11 alandela iintsapho ezintathu ezinxulumene nokuhlala kwindawo yaseLos Angeles.
Ukudlala indawo edlalwa ngu-Ed O'Neill, uSofia Vergara, uJulie Bowen, uTy Burrell, uJesse Tyler Ferguson, u-Eric Stonestreet noSarah Hyland, usapho lwale mihla lwenzela ukubukela ukukhanya okugqibeleleyo, kunye nomdlalo obalaseleyo wokuhambisa imincili njengentsapho enye enkulu edibeneyo .
Ukuba emva kwento ethile ukhaphukhaphu kuneGrey's Anatomy, emva koko iZikhuhli luthotho lwezonyango kuwe.
Umlingisi uZach Braff, uSarah Chalke kunye noDonald Faison njengabafundi bezonyango kwiSibhedlele Sentliziyo Esingcwele, le sitcom ibaleke ixesha elide iphumelele amabhaso ngendlela ehlekisayo yesitayile, abalinganiswa abangaqhelekanga kunye nemidlalo efudumezayo yomdlalo weqonga.
UPhineas kunye noFerb
Olu ngcelele lweDisney Channel lulandela oomama abatshatayo uPhineas (uVincent Martella) noFerb (Thomas Sangster), abachitha iholide zabo zasehlotyeni bethatha iprojekthi entsha yebhongo yonke imihla, ekufumaneni isixeko esilahlekileyo saseAtlantis ekwakheni iirollercoaster kwigadi yabo yangasemva.
Iinjongo zabo ziyabacaphukisa kakhulu udade wabo omdala uCandace (Ashley Tisdale), osoloko ezama ukufaka amakhwenkwe engxakini, ngelixa isilwanyane sabo uPatrus, oyimpimpi ngasese, ezimisele ukuphelisa izicwangciso zesazinzulu esibi uGqirha Doofenschmirtz.
UGordon Ramsay: Awaziwanga
Umpheki osaziwayo uGordon Ramsay uzenzele igama lokuba ngqongqo ekhitshini, kodwa ngoku uzipholela ngaphandle kwendawo yakhe yokuthuthuzela kolu ngcelele lukhulu. Engafundiswanga uyambona esihla esiya ezintlanjeni, enqumla ulwandlekazi, enqumla emahlathini kwaye enyuka iintaba ezinde, konke oko kusukelwa ziincasa ezintsha kunye nezitya ezivela kwihlabathi liphela. Ngaphandle kokudibanisa ukuphefumlelwa kokupheka kunye nemincili yokunyathela umhlaba, uthotho lunento kuwo wonke umntu, lonke elixa livula iwindow enomdla kwiinkcubeko ezingaziwayo nakwindawo zokutya.
Ukujikeleza kwiDisney Channel hit Yiyo ke loo Raven, iKhaya laseRaven libamba neRaven Baxter (Raven-Symoné) kwiminyaka eli-10 emva kweziganeko zothotho lokuqala kwaye ufumanisa ukuba ukhulisa iwele lakhe elineminyaka eli-11 ubudala iNcwadi kunye noNia phantsi Uphahla olufanayo njengomhlobo wakhe osenyongweni u-Chelsea (u-Anneliese van der Pol) kunye nonyana wakhe u-Levi oneminyaka eli-9 ubudala.
Ngelixa uRaven engabaxelelanga abantwana bakhe malunga namandla akhe obuchwephesha, kungekudala ufumanisa ukuba unyana wakhe uBooker ufumene amandla.
Olu luhlu lutsha lwamaxwebhu, olulawulwa ngumdlalo webhola yomnyazi uLebron James, ubalisa ngamabali obomi oludwe lwabakhenkethi abakumgangatho wehlabathi, iimvumi kunye neembaleki.
Kwisiqendu ngasinye kudumileyo owaziwayo, kunye neenkwenkwezi ezibuyela kwiidolophu zabo kwaye bephinda bajonga indawo ezazidlala indima ebalulekileyo ekukhuleni kwabo ngelixa abantu abasondeleyo kubo babelana ngeenkumbulo ngabo.
Iinkwenkwezi ezithatha inxaxheba zibandakanya uPitch Perfect star Adam Devine, abadlali Anthony Davis and Candace Parker, actress Ashley Tisdale, Stranger Things star Caleb McLaughlin,, singer Colbie Caillat, dancer Julianne Hough, and TV and film star Nick Cannon, actor Nick Kroll and American footballer Rob Gronkowski.
Umhlaba uye kuNed
Uthotho lwantlandlolo oluvela kwiNkampani kaJim Henson, uMhlaba ukuya kuNed ulandela umphambukeli onebala eliluhlaza okwesibhakabhaka, kunye ne-lieutenant yakhe, uKornelius, othunyelwe ukuya kuhlola uMhlaba ukuze ahlasele kwaye endaweni yoko bathabatheke yinkcubeko ethandwayo-baqala eyabo incoko kwinkqubo.
Uluhlu lweendwendwe ezidumileyo zijoyina ulonwabo, kuthotho lokuqala lokubona ukubonakala kwezinto ezithandwa nguRuPaul, Joel McHale, Kristen Schaal, Billy Dee Williams, Eli Roth noReggie Watts.
Akunakuze kubekho umxholo weKermit kunye no-Miss Piggy okwangoku. Iintsomi ze-Showbiz Ii-Muppets zibuyele kuthotho lwefomathi engabhalwanga ebona uGonzo kunye nabahlobo bazo zonke iintlobo. Iqela lemigulukudu lidibana nabantu abadumileyo, libamba amaqela okupheka kwaye lize liphose umdlalo wezinto zomdlalo nawo. Ii-Muppets zinelayisensi epheleleyo yokuba zi-anarchic, zi-hilarious ngokwazo kwaye kulungile kuthi. Isiqendu sokuqala sibonisa iRuPaul, ngelixa elilandelayo libona uMiss Piggy kwindawo efanelekileyo yokuqhuba.
Ummeli we-Marvel Carter unike abaphulaphuli izipho ezithile ezothusayo ngokuqhutywa kwexesha lonyaka. Ilandela uPeggy Carter (uHayley Atwell), iarhente eyimfihlo eyimfihlo ye1940s yeStrategic Scientific Reserve yaseNew York City (SSR).
Ayisihambisi kuphela isenzo sokuqhushumba, kodwa ababukeli baphinde bajonge ngakumbi abanye babalinganiswa be-MCU abanomdla kakhulu. Oku kubandakanya utata kaTony Stark uHoward Stark (uDominic Cooper) kunye nenkuthazo ye-Iron Man's AI Edwin Jarvis (James D'Arcy). Ngapha koko, khetha iziqendu ezijikeleza Igumbi eliBomvu elimangalisayo elingumbindi wenkqubo yoMhlolokazi Omnyama.
Ngcono nangakumbi, ineziqendu ezili-18 kuphela zizonke, libali onokufikelela kulo kwiibhayingi ezininzi.
Enye yeentsapho ezidumileyo kwihlabathi yenye yezinto ezibalaseleyo kwikhathalogu yeDisney Plus, enama-30, ewe ufunda ukuba ngokuchanekileyo, ngama-30, ngamaxesha apheleleyo omboniso oopopayi omangalisayo okhoyo ngoku. Kwaye iiSimpsons ezikhethekileyo ngoku ziyafumaneka ukusasaza.
Ngaphezulu kweminyaka engamashumi amathathu uHomer, uMarge, uBart kunye noLisa baye baba sisiseko kubomi bezizukulwana ezininzi zababukeli beTV kwaye ngokuqinisekileyo bebekwiindawo ezininzi ezonwabisayo endleleni - kwaye babone ezinye zintle kakhulu iinkwenkwezi zibajoyina kwii-cameo zeSimpson Ukusuka kuPaul McCartney kunye noMick Jagger kuStephen Hawking noJohnny Cash.
Kuxhomekeke ekubeni umdala kangakanani kwaye uqala ukubukela umboniso, wonke umntu unexesha elahlukileyo alithandayo, kodwa inye into eqinisekileyo, ukuba ufuna ukuhleka kunye nokukhanya okukhanyayo kwilizwe lokwenyani, iSpanishfield ngokuqinisekileyo indawo yokuya kwindawo yabaninzi. Ke kutheni ungazonwabisi kwaye ubuyele kwikhathalogu yangasemva ukonwabele ukuthanda kwakho kwakudala kwaye ufumane iziqendu ezitsha ongazange wazi ukuba zikhona.
Nalu uluhlu lwethu Iziqendu ezilungileyo zeSimpson ukuze uqalise.
Umdlalo wokudlala kunye nekamva
Inomtsalane. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuchaza le vidiyo ikhethekileyo isuka kwiiSimpsons. Isenokuba mfutshane, kodwa, ukuba nobulungisa, injalo neyona nto iphambili kuyo: ibali lase-Springfield elijolise kuMaggie Simpson, elona lungu lincinci losapho lomntu wonke oluthandekayo olutyheli.
Ekuqaleni kwakudlalwa kwii-cinema ngaphambi kokuhlolisiswa kwe-Onward (ngo-Pstrong, efana ne-Simpsons studio 20th Century Fox, ephethwe yi-Disney), okhethekileyo ubona uMaggie egcinwe kwintlekele kwindawo yokudlala ngumntwana oliqhawe.
Emva komhla wokuqala we-playdate, uMaggie akakwazi ukulinda ukuba abone umntwana wakhe omtsha kwakhona ngosuku olulandelayo, kodwa izinto azihambi ngokuchanekileyo njengoko bekucwangcisiwe, isithethi sifunda. Ngaba ikamva (okanye uHomer) liya kuhamba ngendlela yakhe?
Ihlabathi ngokukaJeff Goldblum
Thina wadibana nabasebukhosini baseHollywood uJeff Goldblum Kutshanje ukuba nengxoxo malunga nomboniso wakhe omtsha kunye nokudlala umdlalo obizwa ngokuba 'Ngokwe' - kusinike ukuqonda okuncinci malunga nendlela inkwenkwezi yeJurassic Park ecinga ngayo. Kodwa ukuba ufuna nyani ukungena engqondweni kaJeff Goldblum, lo ngumboniso wakho. Musa ukulindela ukuqonda ngokupheleleyo indlela le ngqondo yeengcinga ezihamba ngayo nangona kunjalo-yindlela ekhethekileyo enomdla yokubona umhlaba.
I-quirky kunye ne-upbeat star yase-Hollywood iyonwabela ngokucacileyo yonke imizuzwana yoluhlu lwamaxwebhu, abona umdlali we-diving enzulu engena kuzo zonke izinto ezibalulekileyo ebomini: sithetha ikofu, imidlalo yevidiyo, abaqeqeshi kunye ne-ayisi khrim. Awusoze ujonge i-cornetto ngendlela efanayo kwakhona emva kokuva ukushushu okukhethekileyo kukaJeff…
Yiza noJeff kuhambo lokufumanisa kule nkqubo imnandi izakuthumela ingqondo yakho kwizigidi ezahlukeneyo.
Inkwenkwezi yeNdawo elungileyo uKristen Bell uzisa lo mboniso ubunyani bokwenyani, ojolise ekudibaniseni umdlalo wobomi bokwenyani bomculo wesikolo esiphakamileyo saseMelika kumdlalo wokugqibela. Ke khawufane ucinge ukuba udlale iRizzo kwimveliso eneentloni kancinane yeGrisi, emva koko iDisney Plus iyankqonkqoza emnyango ibuza ukuba ungathanda ukuphinda uyidlale indima- yile nto kanye yenzekayo apha, kwaye siyamangaliswa ukuba zingaphi ndinomdla wokubuyela eqongeni! Yenza ukonwaba okukhulu nangona.
Amabali obuntu ayashushu ngenene-abantu abathe baphathwa gadalala ebomini kwaye banyanzelwa ukuba bayeke amathemba abo omsebenzi wokucula bafumane ithuba lokuba kwindawo ebonakalayo kwakhona kwaye lixesha lokulixabisa. Kodwa ayisiyonto yokwenza ukuba abantu abalungele ukwenza intsebenzo enkulu- ngaba baya kuwakhumbula amanyathelo? Ngaba amazwi abo aya kumceli mngeni? Ubuncinci uKristen uneetoni zamava e-Broadway zokwabelana nabo.
Ibali lezinto zokudlala: Ifolokhwe ibuza umbuzo
Ukuqhekeka kweqonga leQonga leToyitoyi 4, uForky unikwe owakhe umboniso kwaye uyonwabile ngokupheleleyo. Ukuba uthe waphoswa yifilimu, Forky yeyona nto yokudlala ayithandayo uBonnie, umhlobo owenzelwa ekhaya owaphakamisa uWoody weba iintliziyo zabantu bonke. Akukho ntsingiselo xa unomzimba wespork, iingalo zepipecleaner kunye nokujonga ngamehlo.
Uluhlu lweenxalenye ezili-10 zeebhulukhwe ezimfutshane lunendawo elula kakhulu: UForky ubuza imibuzo ebisoloko idlala engqondweni yakhe, ukusukela kokuhlekisayo 'Yintoni iChizi?' Ukuya kwingxoxo-mpikiswano ethi 'Buyintoni uBugcisa?' Intsingiselo 'Yintoni ixesha?'. Ukuba umntwana wakho ukubuze omnye wale mibuzo kutshanje kunokuba sisiqabu kuye ukuba u-Forky azame ukufumana impendulo kubo! Ikwabonisa ezinye izinto ezithandwayo zeToyi Toy njengoRex kunye noHamm, umboniso uyinto eyamkelekileyo yovuyo kusuku lwakho.
Siyathemba nje ukuba udumo aluyi entlokweni emileyo kaForky…
Abalandeli beStar Wars sele beziva ngathi yiKrisimesi okoko kwasungulwa iDisney Plus, kunye nokusasazwa kweMandalorian (sinentliziyo Baby Yoda) kwaye uninzi lweefilimu ezikhoyo ukubukela kwakhona eqongeni. Kodwa ayipheleli apho ngo-2008 uthotho lweeMfazwe zeMfazwe eziManyeneyo zikwabonelela ngeempendulo kuye nawuphina umntu owakhe wazibuza ukuba kwenzeka ntoni phakathi kweStar Wars Episode II kunye nesiqendu III.
Olu kongezo luphilayo kwisithuba se-saga lusithatha sibuyele apho, singena kwibali lika-Anakin Skywalker, u-Obi-Wan Kenobi kunye namanye amajita e-Jedi njengoko besilwa ne-Count Dooku engendawo kunye ne-General Grievous. Olu luhlu lukwayindawo entle yokungena yabantwana, indlela efikelelekayo kwi-saga enabalinganiswa abatsha kunye neziqendu ezizimeleyo zokuzonwabisa.
Ngaphandle kwemizamo yokuphelisa imveliso ngo-2012, umboniso womlandeli omkhulu olandelayo uthetha ukuba baninzi abantu abanomdla wokuwugcina emoyeni - iNetflix ivuse umboniso kuthotho olunye ngo-2014, ngaphambi kokuba iDisney Plus iyalele ixesha lesixhenxe kulo nyaka.
UMculo weSikolo samabanga aphakamileyo: Umculo: Uthotho
Kuyavunywa, igama lide linomoya. Kodwa lulwimi ngabom esidleleni kuba umboniso ngokwawo ungumbono ophezulu ngokufanelekileyo.
Uyayikhumbula iMusical High School, ifilimu eyaphehlelela ikhondo likaZac Efron kwaye wasinika ingoma ethi 'Sonke Kule Ndibaninzi'? Kwakunjengokuthambisa isizukulwana esitsha. Ewe, olu luhlu lwe-mockumentary-style spin-off uthotho lusibuyisela kwisikolo sokuqala apho ifilimu yadutyulwa, eMpuma ePhakamileyo. Abafundi balapho abakaze benze owabo umculo, ngaphandle konxibelelwano lwabo olusondeleyo nefilimu. Utitshala wabo womdlalo weqonga ucinga ukuba oku kukungcungcuthekisa, ngoko ke uphicotho-zincwadi luya kuqala kulo mboniso… Ngubani oza kufumana iindawo kwaye ukuthandana, ubutshaba kunye nobomi bokwenyani buza kuyichaphazela njani imveliso?
Into ebalulekileyo yokwenza ukuba intloko yakho ijikeleze kukuba le yintsomi, nangona iboniswa njengombhalo-ke abafundi bangabadlali nyani kwaye umboniso ubhaliwe. Nje ukuba uyiphikise loo nto, kumnandi kakhulu!
Iprojekthi yeHarvel yeMarvel
Eli ayilo elinye iqela lamaqhawe encwadi yamahlaya onokuthi uhlangane nawo, endaweni yoko uMarvel unyathela kwihlabathi lokwenyani ukuhlangabezana nolunye ulutsha olwenza umahluko- kule mihla, ngamagorha obomi bokwenyani.
Oko kungavakala kuyinto encinci, kodwa la manqaku angama-20 athobekile kwaye ayakhuthaza, ukusuka 'ku-Adonis ongenakunqandeka', inkwenkwe engayi kuvumela ukungaboni kwayo kumnqande ekubeni ngumdlali webhola ekhatywayo, 'kuRebekah onamandla', oneminyaka eli-12 ubudala esilwela ukulingana kwe-LGBTQ. Aba bantwana abayi kubanjwa mva ngeminyaka yabo kwaye bonke bafuna ukungqina ukuba abantwana banelizwi elinamandla, ukuba, xa lisetyenziselwa amandla alo apheleleyo, liyakwazi ukutshintsha umhlaba. Ayisiyiyo kuphela iMarvel yokubhiyozela amabali abo, baguqula ngamnye wabantwana ukuba abe ligorha leMarvel ngencwadi yabo yamahlaya, eyenziwe ngabahleli abaphambili benkampani. Elinye lawona macandelo abalaseleyo kulo mboniso ubukele aba bantwana baqaqambile njengoko ubuso behlekisayo butyhilwa…
Iiarhente zeMarvel ze-S.H.I.E.L.D.
Ukuphuma kwimiboniso bhanyabhanya ephambili yeMarvel, olu ngcelele lubona indawo yakhe njengoPhil Coulson, iarhente yombutho i-SHIELD (Strategic Homeland Intervention, Enforcing, and Logistics Division). Umsebenzi wayo? Ukuphanda imisitho engaqhelekanga kunye nokubona okuphezulu kwabantu-le yiarhente yokugcina uxolo egxile ekubekweni esweni ngelixa amagorha asindisa ubomi kwihlabathi liphela.
Ixesha lokuqala lilandela uCoulson (owakhe wasweleka ngaphambili kwiAvengers kodwa wavuswa, uyaqhubeka?) Njengoko ehlanganisa iqela lakhe elikhethekileyo labameli abaphezulu ukuba baphande ngokuthe cwaka ezinye izinto ezingaqhelekanga. Ecaleni kwakhe nguSkye, iarhente engenabuntu enokwenza iinyikima, ingcali yezixhobo uFitz, umqhubi wenqwelomoya ngoMeyi kunye nengcali ye-ops emnyama kwiWadi. Awudingi ukuba ubukele imovie ukuze ungene kolu ngcelele, kodwa njengazo zonke izinto ezimangalisayo kukho izingqinisiso eziya kuvuza abalandeli abathembekileyo.
Iingcelele ezintandathu ziye zasasazwa ukuza kuthi ga ngoku, kunye nexesha lesixhenxe kunye nelokugqibela lokudlala ngoNovemba.
Abaphindezeli: Amagorha aMkhulu oMhlaba
Ngaphambi kokuba ubuze, hayi, le khathuni ayisetwanga kwi-MCU. Ukugxila kwiqela lokuqala labaphindezeli kwii-comics (Iron Man, Giant-Man, Hulk, Thor, kunye no-Wasp, abathi kamva bajoyine izinto ezithandwa yiCaptain America kunye neBlack Panther), olu luhlu luphilayo lubona iqela eliphambili lokulwa ii-supervillains kunye nezinye izoyikiso ukukhusela uMhlaba. Olu luhlu luqala nge-75 yeebaddies eziyingozi kakhulu kwihlabathi zikhutshwa ngaxeshanye - usuku olubi eofisini yamagorha ethu, kodwa kumnandi kakhulu kuthi njengababukeli.
Ngokucacileyo olu ngcelele alunazo iinkwenkwezi zefilimu, ezazibonisa uRobert Downey Jr, uScarlett Johansson, uMark Ruffalo kunye namanye amabali aseHollywood, kodwa ngokungabikho kweminye imiboniso bhanyabhanya kolu ngcelele lokuzonwabisa, olothusayo ikwahamba nencwadi yayo ehlekisayo. Kwahlala kuphela amaxesha amabini ngaphambi kokuba ithathelwe indawo yiAvengers Assemble, ke ngekhe ikuthathe ixesha elide ukubamba.
Iinjana. Ukuba uyabathanda, uya kuluthanda olu ngcelele, lulandela inkunkuma yee-doggies ezithandekayo ezintandathu njengoko zizama ukuba zizinja ezikhokelayo eziqinisekisiweyo.
Yinto entle njengoko kuvakala, kodwa ayizizo zonke izisulu zesisu kunye neewalkies. Iikhrayitheriya zokuba ibeyinja ekhokelayo zingqongqo ngokungakholelekiyo, kunesizathu esivakalayo, kwaye iintsapho ezithathe intshontsho kufuneka zisebenze nzima kakhulu nazo. Inja ekhokelayo kufuneka ithembeke ngokupheleleyo, kunzima ukuyiphazamisa kwaye ithobele ngokupheleleyo - nabani na ochithe imvakwemini enenjana encinci uyayazi indlela ekukhohlisayo ngayo ukufezekisa! Akukho siqinisekiso sokuba nayiphi na kwezi zinja zintandathu ziya kulugqiba uqeqesho lwabo ngempumelelo, kodwa uzifumanisa uzilungele kuwo onke amanyathelo endlela.
Ngendlela, ukuba ucinga ukuba sele uwubonile lo mboniso kwiNetflix awunayo - iNetflix inefilimu, iPick of the Litter, ephefumlele uthotho lweDisney Plus TV enegama elifanayo. Ukuba uyonwabele ifilimu, ngokuqinisekileyo awufuni kuphoswa yinguqulelo yeTV, engumbono ofanayo, ukulandela nje inkunkuma entsha kraca yamantshontsho amahle.
Xa undwendwela iDisney World ufuna ukuba amava athabathe umoya kunye nomlingo. Emva kwayo yonke loo nto, yiyo loo nto abantu begcina ukuya, hayi nje ukudibana neMickey Mouse kunye neenkosazana zeDisney, kodwa ukuphonononga indawo engafani nenye.
Ewe umzamo omkhulu uya ekudaleni umhlaba omangalisayo onje. Inyathelo eliya phambili kwi-Disney Imagineers (yinyani leyo bayibiza ngokuba ziinjineli zabo, ngokoqobo yonke into inothuli lwentsomi olufafazwe phezu kwayo kwiDisney!).
Eli lithuba elinqabileyo lokujonga emva kweziqendu kwaye ufumane iimfihlo ezimbalwa, njengoko iWalt Disney imaging iphosa iingcango zayo zivulekile. Basinika ukufikelela kuzo zonke iiNdawo ukuze babone iindibano zocweyo ezimangalisayo apho ukukhwela kukhulelwe khona, kuyilelwe kwaye kwavavanywa, kwaye kuyamangalisa. Olu luhlu lujonga indlela inkampani ephuhlise ngayo ukukhwela kwepaki yomxholo kunye nomtsalane kwihlabathi liphela kwaye ngelixa umboniso ngokucacileyo usisibhengezo esikhulu, kufuneka sitsho ukuba yingqondo ebabazekayo nayo. Ukucinga okuninzi, uthando kunye nenkathalo ingena nakwizinto ezincinci.
Pstrong: Kubomi boBomi
Eminye imiboniso yekhamera efihliweyo inokuba nentsingiselo-yomoya, kodwa le yeyona nto izukileyo yokuziva ulungile, uthotho lweenjongo zeprank esakha sazibona. Uluvo kukuba abalinganiswa abavela kwilizwe lePstrong bayakhutshwa kwizitrato zaseNew York, besenza abantu abaqhelekileyo ukuba bathathe kabini kwaye bazibuze ukuba kuqhubeka ntoni emhlabeni-ngokuqinisekileyo kuya kukwenza ukuba ujonge phezulu kwifowuni yakho ukuba ubonile uWoody kwiToyi. Ibali, akunjalo?
Khawufane ucinge xa ​​ujikeleza ipaki kwaye ngequbuliso ukhubeka kwikhonkco ukuya ngaphakathi ngaphakathi. Okanye use-aquarium kwaye ubone uHank i-octopus uzama ukubaleka. Ngelixa abantu abadala behlekiswa zezi meko, abantwana bathenga ngokupheleleyo kuzo kwaye kuyonwabisa ukubukela ubuso babo njengoko idrama iqhubeka. Isiqendu sethu esithandayo yiWall-E njengoko efumana ukubonakala okuhlekisayo kwizitrato zaseNew York, hayi ubuncinci kuzo zonke iFrench Bulldog enomdla!
UDavid Tennant udlale iindima eziphezulu ngexesha lakhe, ukusuka kwaGqirha ukuya eHamlet, kodwa uyavuma ukuba waziva enoxinzelelo lokwenyani xa kusenziwa ukuqala kwakhona kwale khathuni ye-1980! Umboniso ubaluleke kakhulu kwaye u-nostalgic kwabaninzi, akazange afune ukuyiphazamisa.
UDavid uvakalisa uScrooge McDuck, umalume kaDonald Duck ohlukanisiweyo. Esi sibini sithathe isigqibo sokuphinda sinxibelelane kwaye ngaphambi kokuba uScrooge azifumanele umntwana wakhe, uHuey, uDewey noLouie kwakhona. Ukunyamekelwa kwabantwana kunye neebhlorho zokwakha, konke ngosuku olunye! Ndonwabile ukubuyela kusapho, uScrooge emva koko uya kwelinye inyathelo, emema bobane ukuba beze kuhlala naye, kulapho ke ziqala khona izinto ezothusayo.
Abadlali akufuneki bakhathazeke malunga nendlela abalandeli abaza kusabela ngayo - ukubuya kwabo kwehla ngesiqhwithi, namaxesha amabini sele efumanekile kunye neyesithathu isendleleni. Ukuba uyathanda ukukhumbula umlingo wenye yezona miboniso zibalaseleyo zeDisney zabantwana, silucebisa ngokupheleleyo olu luhlu lumnandi.
Idayari kaMongameli wexesha elizayo
UJane inkwenkwezi yeVirgin uGina Rodriguez uvelisa kwaye avele kolu hlaziyo losapho malunga nentombazana eneminyaka eli-12 eya kuthi ngelinye ilanga ikhule ibe nguMongameli wase-USA. UGina udlala u-Elena okhulileyo, ofumana idayari yakhe endala ngenye imini e-White House kwaye aqale ukukhumbula malunga nobuntwana bakhe. Ewe, nkqu neenkokheli eziphambili kwafuneka zijongane neembambano zesikolo, iintlungu ezikhulayo, kunye neentloni zokufikisa, konke oku kubuyela umva kunye namava no-Elena njengoko wayefunda iingcinga zakhe. Asiboni okuninzi ngoGina emva koko, eli libali lokwenyani lentombazana encinci kunye neentsuku zokuqala zamabhongo akhe, xa eqala ukuphupha ngomsebenzi ophezulu waseMelika.
Ngelixa u-Elena ejamelana nobunzima, njengokufunda ukwamkela iqabane lakhe elitsha lomama, le yinto engenabungozi, eyonwabisayo yabantwana ebhiyozela usapho kunye nobuhlobo. Iswiti, iyakhuthaza kwaye iyathandeka ukubukela, kukujonga ngokugqibeleleyo kwamalungu amancinci osapho lwakho - okanye ukubukela kunye njengoko kukho iziqhulo ezimbalwa apho nakubantu abadala.
Yiba ngumpheki wethu
Izinto ezimbalwa zokudideka malunga nolu khuphiswano lokupheka. Okokuqala, ngaphandle kwegama livakala kakhulu njengengoma ethi 'Yiba lundwendwe lwethu' kuBuhle nakwirhamncwa, umboniso awunanto yakwenza noLumiere isiphatho sezibane. Kwangoko kuyaphoxa. Kwakhona, uthotho luphethwe ngu-Angela Kinsey, owaziwa kakhulu ngendima yakhe kuhlobo lwe-US yeOfisi, ethi, ukuba ububukele lo mboniso, unokuziva ngathi kukusayina okungalindelekanga.
Nje ukuba intloko yakho ijikeleze yonke loo nto, olu ngcelele luyonwabisa, nokuba yincwadana encinci. Iintsapho ezintlanu zikhuphisana, ukupheka izitya eziphefumlelwe ziimovie zeDisney kunye nabalinganiswa, abaya kuthi emva koko bagwetywe ngabapheki bakwaDisney. Kukho ibhaso elimangalisayo ekunikezelweni nalo, njengoko usapho oluphumeleleyo luza kutyiwa sisitya salo, uqikelele, Alton Towers! Siyahlekisa kunjalo, iya kufumaneka uku-odola kwiindawo zokuchithela iiDisney World. Zeziphi iintsapho eziya kukhanya kwaye ziya kuthi ziphele ngeqanda ebusweni babo?
I-Gravity Falls e-Oregon ayikho kwenye indawo ongathanda ukuya kuyo ngeholide. Indawo etyhafisayo, egudileyo (kwaye edla ngokuhlekisa) ichazwa kwikharavani njenge ‘dolophu engaqondakaliyo emantla kwesiqhelo apho into engachazwanga iya kuhlala icacisiwe… okanye iya kuba njalo?’, Ekunika incasa yendawo!
I-Dipper Pines (evakaliswe nguJason Ritter) iintloko kwi-Gravity Falls kunye newele lakhe u-Mabel ukutyelela umalume wabo omkhulu, uStan ngehlobo. Nangona kunjalo bava kwangoko ukuba into ayilunganga kule dolophu ingaqhelekanga, kwaye ngamandla angaphezu kwendalo kunye nezidalwa ezingaqhelekanga ezijikeleze yonke ikona, ngekhe kube kudala ngaphambi kokuba bahlangane nento eyimfihlakalo. Aba ngabantwana bekhathuni aboyiki ngokulula- endaweni yokubaleka baqala uphando lwabo.
UAlex Hirsch, owadala uthotho, ukhankanya iiSimps njengeyona mpembelelo inkulu, ngokumbonisa ukuba oopopayi babengengabo abantwana kuphela kwaye uthi umboniso uphefumlelwe ziiholide zakhe zasehlotyeni newele lakhe.
Yiyo ke iRaven
Hayi kwisigidi seekhilomitha kude noSabrina i-Teenage Witch, le sitcom inamandla angaphezu kwendalo ilandela uRaven Baxter, umfana okwishumi elivisayo onamandla obugqi, ofumana ikamva lakhe, alisebenzisayo ukuzifaka engxakini! Ingxaki kukuba, nangona enokubona phambili ngexesha angaze afumane umfanekiso opheleleyo kwaye akanakubonakala ngathi uzitolika ngokuchanekileyo izinto azibonayo. Ubundlobongela buqhubeka…
IRaven ayichazwanga nje ngemibono yayo nangona-inobuntu obukhulu, iyayithanda ifashoni kwaye iyila iimpahla yona. Unazo zonke iingxaki eziqhelekileyo zokujongana nazo, kubandakanya umntakwethu omncinci ocaphukisayo, uCory, kunye nabahlobo abakhulu abaza kuhlala nabo, ngakumbi uEddie noChels.
Lo mboniso udume kakhulu kwiDisney Channel, eqhuba amaxesha amane kwaye waba ngumboniso wokuqala kwisiteshi ukufikelela kwizigaba ezili-100. Ngoku iyafumaneka kwiDisney Plus ukuba yonke intsapho iyonwabele.
Into yokuqala yokufumanisa ukuba ayilulo uthotho olufundisa indlela yokuthenga (siyazi kakuhle unyango olusele lukhona, enkosi kakhulu). EMelika 'udidi lwevenkile' ligama elisetyenziswa ngabantwana besikolo ukubhekisa kwizifundo zabo zomthi - ke cinga ukujijisana kancinane emigceni, ngakumbi iiplanga zomthi.
Olu luhlu lonwabisayo, olubanjwe ngumlingisi uJustin Long, lamkela amaqela ali-18 abakhi abathathu abancinci, elowo abelwe utitshala (ezempilo kunye nezokhuseleko!). Kuzo zonke ii-rounds ezisibhozo babamba izixhobo zabo kwaye bakhe indalo emangalisayo ukusuka ekuqaleni ukuzama ukubizwa njengeentshatsheli. Asithethi nje ngokunkqonkqoza ezinye iifoto okanye iiplacemats nangona, oh hayi, le nkqubo ikwinqanaba elikhulu kakhulu-iimoto zokudlala, iikhosi zegalufa ezincinci kunye neebhlorho zonke zikuluhlu lwezinto eziza kwenziwa. Ngubani owaziyo, kunokuba kukukhuthaze ukuba usete i-screwdriver kwaye ekugqibeleni ufumane i-DIY.
Iinkqubo zeTV kunye neemovie zisiza kungekudala kwiDisney Plus
Imiboniso kaMarvel kwiDisney Plus
Ewe, uTom Hiddleston ubuyile! Umntu wakhe omangalisayo, uLoki ufumana eyakhe i-MCU TV spin-off kwaye asinakulinda ukuyibona. Ukuchola emva kweAvengers: Endgame, uthotho lubona uLoki esebenzisa iTesseract ukuhamba ixesha, ukungqubana nembali yoluntu njengoko ehamba. Uninzi lolwazi malunga nalo mboniso lugcinwa lusongelwe okwangoku, kodwa sinokukuxelela ukuba u-Owen Wilson ukwisamente, kunye nenkwenkwezi yaseBritane eyonyukayo uSophia Di Martino. URichard E. Grant utyikitye indima yendwendwe. Ukuza ngo-2021
Ukumangaliswa Yintoni Ukuba…?
I-Marvel's What If is Marvel Studios yokuqala opopayi bhanyabhanya okoko waba yinkampani yabo yemveliso, kwaye kuthatha inkuthazo kwiincwadi ezihlekisayo zegama elifanayo. NgokukaDisney, isiqephu ngasinye siza kuvavanya umzuzu obalulekileyo kwiMarvel Cinematic Universe kwaye siyiphethulele entloko, sikhokelele abaphulaphuli kwindawo engaziwayo. Ke sikhangela enye indawo kwaye sifumanisa ukuba zingaba yintoni na iziphumo ukuba izinto bezivele ngokwahlukileyo nje kancinci. Izinto ezinomdla. Ukuza ngo-2021
I-superhero yokuqala yamaSilamsi, UNksk Marvel Ufumana uthotho lweDisney Plus yakhe. Ibhalwe nguBisha K Ali (weHulu Imitshato emine kunye nomdlalo kamabonwakude wokuNgcwaba ), Olu ngcelele luya kugxila kulutsha lwasePakistan naseMelika eligama linguKamela Kahn. Ukuphuma kusapho lwenkolo eNew Jersey, unamandla e-polymorphy-okt ukukwazi ukolula kunye nokutshintsha imilo. UKamela Khan yintshatsheli ezinikeleyo kuKapteni Marvel kwaye unethemba lokulandela umzekelo wakhe. Ukuza emva kwexesha ngo-2021 / ekuqaleni kuka-2022
Emva kokuba enze amatyala akhe kwakhona ngoFebruwari 1980 kuStan Lee noJohn Buscema's Marvel comic Savage She-Hulk # 1, lo mntu uligqwetha kunye nomzala kaBruce Banner abafumana utofelo-gazi olungxamisekileyo kuye - inkqubo esindisa ubomi eyashiya yena eneempawu zobomi zeHulk, emguqula ukuba abe U-Hulk . Ukuza ngo-2022
Isaphetha neentolo zipholile ngokuqinisekileyo. Jonga uRobin Hood, jonga uLegolas Greenleaf. Ngoku umtoli oyingcali kwi-Avengers crew uya kubuya kwiinkqubo zakhe zeTV, aphinde adlalwe nguJeremy Renner. Cwangcisa emva kweziganeko zeAvengers: Endgame Hawkeye uthotho lusetelwe ukubonisa umlingiswa uKate Bishop oba lilandela lika Hawkeye. Akukacaci ukuba ngubani oza kudlala uKate Bishop, kodwa ngokutsho kwamarhe uPitch Perfect star Hailee Steinfeld ukwisakhelo.
INyanga yeNyanga , aka Marc Spector, wayengummeli we-CIA owayesindisiwe ngobomi bakhe yiNyanga kaThixo Khonshu. Emva kokuba uMarc ebulele ubugrogrisi nemesis Bushman, waba yiNyanga Knight. Akukho zinkcukacha zilahlekileyo ezikhoyo kulo mboniso okwangoku kodwa ngokucacileyo abavelisi bafuna uhlobo lwe-'Zac Efron 'ngendima ekhokelayo.
Le yenye yabalandeli beMarvel hardcore. I-Marvel ye-616 luchungechunge lwamaxwebhu oluya kujonga kwimpembelelo yenkcubeko yeMarvel comics, ihlola indalo kunye nabalinganiswa bayo ngokweenkcukacha ezingaphezulu.
Iimfazwe zeNkanyezi zibonisa kwiDisney Plus
Uthotho lweObi-Wan Kenobi
U-Ewan McGregor ubuyile! Ewe, emva kokulinda ixesha elide kunye neminyaka emininzi 'siza kubona', ekugqibeleni kwenzeka: U-Ewan uza kuphinda enze indima yakhe njengeJedi Uthotho lweObi-Wan Kenobi iseti phakathi kwe-Star Wars Episodes III kunye ne-IV. Kungenzeka ukuba sibone umlinganiswa esathuthumela kwiziganeko zempindezelo yeSith.
Uthotho lweCassian Andor Star Wars uthotho
Igama elingenasihloko Uthotho lweCassian Andor Inkwenkwezi yeRogue One kaDiego Luna kunye noAlan Tudyk (droid K-2SO) bazokuza kwiDisney Plus. Ekuphela kwento esiyaziyo kukuba ‘luluhlu olutsha lwe-spy olukhuthazwe nguRogue One’ ke akukho nto ingako sinokuthi sikuxelele yona okwangoku. Ngaphandle kokuba sonwabile.
Uthotho lwePstrong kunye neefilimu ezimfutshane kwiDisney Plus
Siyavuya ukuba kuya kubakho uSully noMike ngakumbi kwizikrini zethu, yenye yezona zinto zibalaseleyo ezenziwa kwi-biz. Olu luhlu lwePstrong luchola iinyanga ezintandathu emva kokuphela kwefilimu yokuqala yeMonsters Inc, noJohn Goodman kunye noBilly Crystal bebuyela kwilizwi lamaqhawe ethu amabini. Icwangciselwe inkulumbuso ngo-2020.
Ibali lokudlala: Ubomi beLampu
Ukuba ii-superheroes zeMarvel zonke zifumana ibali eliyimvelaphi, emva koko ukumkanikazi webali likaToy's's kickass ukumkakhe uBo Peep naye kufanelekile. Ngokuqinisekileyo, ufumana eyakhe iPstrong emfutshane, uBomi beLampu, ejonge kwibali lakhe elingasemva kwaye ityhila iihambo zakhe awayenazo phakathi kweBali leToyi 3 kunye no-4, xa wayehlulwa kuWoody.
Le ngqokelela yovavanyo lweefilimu ezimfutshane ezivela ePstrong kukhetho lokwenyani lokukhetha kunye nokufutshane kweebhulukhwe ezimnandi, nganye nganye igcwele ukukhanya kwesitudiyo okufudumeza intliziyo. Ziziphumo zenyathelo lenkampani lokuvumela abasebenzi iinyanga ezintandathu kunye nohlahlo-lwabiwo mali oluncinci ukuba bazenzele iziqwenga ezizimeleyo kwaye baphonononge ubuchule babo. I-SparkShorts izakuqala ukusasaza kule nyanga kwiDisney Plus.
Amaxwebhu kwiDisney Plus
Into engaziwayo: Ukwenza amaFrozen 2
Khawufane ucinge ukuba unoxanduva lokwenza ulandelelo ukuya kwiFrozen, enye yeefilimu eziphumelele kakhulu kwinkulungwane. Olo luxinzelelo! Olu xwebhu luhamba emva kwezigcawu, lubonisa 'ukusebenza nzima kunye nokucinga' okuye kwangena ekwenzeni iFrozen 2, kwilinge lokuphila ngokutyeba komanduleli wayo ngelixa ikrelekrele ngokunokwayo. Udliwanondlebe olunomdla kunye nabadlali kunye nabasebenzi luza kukhanyisa inkqubo yokuyila.
Umlingo wobukumkani bezilwanyana
I-Disney iyaqhubeka nokusamkela ngasemva kweendawo zabo zokuhlala. Ukulandela iMitshato yeDisney Fairytale kunye neNdaba yokuCinga, iNational Geographic isithatha emva kweengcango ezivaliweyo kwi-Animal's Disney Kingdom. Sidibana neengcali zononophelo lwezilwanyana ezihlonitshwayo, oogqirha bezilwanyana kunye neebhayoloji e-SeaBase aquarium ye-Epcot ukufumana umsebenzi oza kujonga izilwanyana. Kwaye siyakufumana uninzi lobuso obuhle, obunobuso.
Jonga ifayile Iimuvi ezilungileyo kwiDisney Plus -Okanye ubone ukuba yeyiphi enye into eyenzekayo ngelethu Isikhokelo seTV .
ingaba ithini inkcazo karhulumente namhlanje
indlela yokwenza imaphu minecraft
intsingiselo ye-222 eluthandweni
zibuya nini ii blinder ezinde
Umhla wokukhululwa kwefilimu ye-deadpool uk
fa indebe yesemi final kwitv